कोभिड-१९ का बिरामी बोक्न निजी विमान कम्पनीलाई 'भ्याईनभ्याई' - BBC News नेपाली
कोरोना भाइरस नेपाल: कोभिड-१९ का बिरामी बोक्न निजी विमान कम्पनीलाई 'भ्याईनभ्याई'
सरकारले गत हप्ता मापदण्ड तयार गरेपछि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित सिकिस्त बिरामीलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पुर्‍याउन हवाई सेवाको बाटो खुलेको छ।
'जीवन सुरक्षाका निम्ति छिटोछरितो माध्यमबाट विमान (हवाई जहाज/हेलिकोप्टर/एयर एम्बुलेन्स) मार्फत् एयर लिफ्टिङ गर्नुपर्नु' खाँचो देखेर मापदण्ड तयार गरिएको बताइएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सूचीकृत गरेका निजी विमान सञ्चालक कम्पनीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर बिरामी ओसारपसार गर्न पाउने व्यवस्था छ।
मापदण्डमा नेपाली सेनाका विमान प्राथमिकता दिई 'स्वास्थ्य मन्त्रालय र सेनाको समन्वयमा जति सक्दो छिटो बिरामीलाई एयर लिफ्टिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने' भनिएको छ।
तर सरकारले प्राथमिकता दिए पनि सेनाभन्दा निजी विमान कम्पनी अगाडि देखिएका छन्।
पहिलेका कोरोनाभाइरस 'हटस्पट'का जनप्रतिनिधिका काठमाण्डूलाई पाँच सुझाव
राजधानीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितका लागि छुट्याइएका शय्याहरू 'लगभग भरिएको अवस्था'
सेनाभन्दा सिम्रिक अगाडि
नेपालमा करिब एक दर्जन हेलिकोप्टर सेवा सञ्चालक छन् र तिनमा सिम्रिक एयरले बिरामी बोक्न सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ।
सिम्रिक एयर हेलिकोप्टरका प्रमुख कार्यकारी बजार अधिकृत योगेश सापकोटाका अनुसार मङ्गलवार मन्त्रालयबाट अनुमति पाएकै दिनदेखि सिम्रिकको हेलिकोप्टरले बिरामी बोक्न थालिसकेको छ।
उनले भने, "हामी पहिल्यैदेखि तयारी अवस्थामा सरकारको स्वीकृतिको पर्खाइमा थियौँ, अनुमति पाउने बित्तिकै सुरु गर्‍यौँ।"
पहिलो बिरामी बुटवलबाट काठमाण्डू पुर्‍याएको सिम्रिकले लहान, भरतपुर र बिराटनगरबाट पनि बिरामी बोकिसकेको छ।
राष्ट्रिय विपद्‌मा प्रयोग हुने नेपाली सेनाका विमानहरूले अझैँ बिरामी बोकेका छैनन्।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेल भन्छन्, "स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्डका प्रभावबारे अध्ययन गरिरहेका छौँ, त्यसबारे निचोडमा पुग्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वयको चरणमा छौँ।"
पहिल्यैदेखि निजीको चासो
सिम्रिक एयरले पाँचमध्ये दुईवटा हेलिकोप्टर बिरामी ओसार्न परिचालन गर्ने जनाएको छ।
सापकोटा भन्छन्, "माग एकदमै उच्च छ। अब केही दिनमै दोस्रो हेलिकोप्टर पनि प्रयोगमा ल्याउँछौँ।"
यसअघि प्रदेश २ बाट स्वासप्रश्वासका बिरामी हेलिकोप्टर भाडामा लिएर काठमाण्डू पुगेका समाचारहरू आएका थिए।
के युवाहरूले कोरोनाभाइरसबारे चिन्ता लिनुपर्छ
पीपीईको अभावमा ब्रिटेनका चिकित्सकको जीवन खतरामा परेको चेतावनी
तर सामान्य अवस्थाको जस्तो उडान गरेर सङ्क्रित बोक्न नपाइने व्यवस्था थियो। त्यसको निम्ति पीसीआर परीक्षण नेगटिभ हुनुपर्ने पनि भनिएको थियो।
लकडाउन र सङ्क्रमणले थलिएको निजी हवाई सेवा सञ्चालक कम्पनीले त्यस्तो माग बढेपछि बिरामी बोक्न मापदण्ड तयार गरिदिन सरकारमाथि दबाव दिइरहेका थिए।
त्यसमध्येको एक सिम्रिक एयरले पहिल्यैदेखि तयारी गरेको तत्कालै बिरामी ओसार्न सकेको हो।
सिम्रिकका सापकोटा भन्छन्, "कुनै पनि बेला देशलाई आवश्यकता हुनसक्छ भनेर उपकरणहरू राखेर एक-डेढ महिनादेखि अभ्यासमा थियौँ, सरकारलाई पनि भनिरहेका थियौँ, अनुमति पाएकै दिनदेखि सुरु गर्‍यौँ।"
भाडा भने महङ्गो
मापदण्ड अनुसार विमान कम्पनीले नै एकजना चिकित्सकसहित कम्तीमा दुईजना स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
अक्सिजन, जीवन सुरक्षाका औषधि, पीपीई र डिसइन्फेक्टर लगायतको व्यवस्था विमानमा हुनुपर्छ। र, दोस्रो उडान गर्नुअघि विमान निसङ्क्रमण गर्नुपर्छ।
सिम्रिकले आइशोलेसन च्याम्बर पनि चीनबाट आयात गरेर हेलिकोप्टरमा राखेर उडान गर्ने गर्छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले ती सबै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले सेनाले उच्च निकायसँग परामर्शको खाँचो देखेको बुझिन्छ।
मापदण्डमा भाडा बिरामी पक्षको हुने उल्लेख छ तर 'निश्चित तोकिएको प्रचलित शुल्कभन्दा बढी भाडा लिन नपाइने' भनिएको छ।
तर सिम्रिकका हेलिकोप्टरका सापकोटाले सामान्यतया करिब दुई लाख ५० हजार रुपियाँ भाडा बढी लिइरहेको जानकारी दिए।
विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था तथा बिमा लगायतले गर्दा भाडा महङ्गो पर्न गएको उनको भनाइ छ।
जे भएपनि त्यो सरकारको घोषित नीतिविपरीत रहेको बताउने प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एक उच्च अधिकारीका भनाइमा मन्त्रालयको मापदण्ड व्यवहारिक नहुँदा अनुगमनप्रति चासो नराखिएको हुनसक्छ।
‘कोरोनाभाइरसबाट ज्यान जोगाउन सक्ने औषधि पत्ता लाग्यो’
सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्ने सरकारको अनुमान किन मिलेन
काठमाण्डूमा सङ्क्रमण बढ्दा के हुन्छ?
सापकोटाले अधिकांश बिरामी काठमाण्डूका अस्पतालमा भर्ना हुन आउन चाहन्छन्।
तर सङ्क्रमण बढ्दै गए काठमाण्डूकै बिरामीको निम्ति अस्पतालको क्षमता नपुग्ने चेतावनी सरकारले दिइसकेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले धेरै र राम्रा स्वास्थ्य पूर्वाधार भएका स्थानका अस्पतालमा उपचारको सेवा उपलब्ध गराउन हवाई उडानसम्बन्धी मापदण्ड बनाइएको बताए।
काठमाण्डूलाई मात्र लक्षित गरेर त्यसो नगरिएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, "त्यो त हिमाली वा पहाडी जिल्लाहरूबाट अन्य सहरी क्षेत्रका अस्पताल जान चाहने बिरामीका निम्ति पनि हो।"
उपचार भइरहेको अस्पतालका चिकित्सकले बिरामीको अवस्था हेरेर बाहिर लग्न सिफारिस गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
पूर्वकर्मचारीलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट जोगाउने काइदा - BBC News नेपाली
बीबीसी नेपाली 18 दिन पहिले
कोरोना भाइरस नेपाल: काठमाण्डूमा जोखिम कम गर्न 'गर्नैपर्ने तीन काम' - BBC News नेपाली
बीबीसी नेपाली 24 दिन पहिले
नेपालमा कोरोनाभाइरसबाट थप ६४१ जना सङ्क्रमित, थप दुईको मृत्यु - BBC News नेपाली
बीबीसी नेपाली3महिना पहिले
कोभिडका गम्भीर बिरामीलाई आईसीयू र भेन्टिलेटर जुटाउन चुनौती - BBC News नेपाली
गोरखापत्र3महिना पहिले
कोरोनाभाइरसको जोखिम बढ्दो, सरकार र आममानिसले अब के गर्नुपर्छ - BBC News नेपाली
भारतमा कोरोनाबाट झण्डै ६ लाख संक्रमित, १७ हजारभन्दा बढीको मृत्यु
नयाँदिल्ली । महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेहरुको संख्या भारतमा छ लाख पुग्न लागेको छ । सरकारी अधिकारीहरुले बुधबार दिएको जानकारी अनुसार भारतमा हालसम्म कोरोनाभाइरसबाट पाँच लाख ८५ हजार ४९३ जना सङ्क्रमित भएका छन् । तीमध्ये पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै १८ हजार ६५३ जना कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार …
चीनको बेइजिङमा अकस्मात भेटिए नयाँ कोरोना सङ्क्रमित
बेइजिङ । चीनमा कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमितहरु फेरि एकाएक बढेका छन् । सरकारी अधिकारीहरुले आइतबार दिएको जानकारी अनुसार नयाँ ६६ जनामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आएको भनिएपनि अहिले पहिलो पटक एकै पटक धेरै जना सङ्क्रमित भेटिएका हुन् । राजधानी बेइजिङमा अहिलेसम्मकै धेरै सङ्क्रमित एकैपटक देखिएको उनीहरुको भनाई छ । चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य …
काठमाण्डौ – चीनमा दुई दिनभित्रमा एक सय ३९ रहस्यमय भाइरसको घटनाहरु रिपोर्ट गरिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । कोरोनाभाइरसको यो नयाँ घटना चीनको वुहान शहर, बेइजिङ र शेनजेन शहरमा पाइएको छ । दुई दिनभित्रमा झण्डै डेढ सय जना सङ्क्रमित भएका हुन् । योसँगै चीनमा यो भाइरसबाट प्रभावित हुनेको सङ्ख्या दुई ...